Sochi Tasa Hunda irra Bahe – Gubirmans Publishing
Qabsoo Oromoof kan moo’ummaa Oromiyaa hin fudhanne waliin dhoofsisi hin jiraatu. Habashaan caba empayeraa duuba akkaataa nagaan olloota saanii waliin jiraatan itt yaaduu qabu. Yoo Oromiyaan bilisomte lola noolaa kan isa Somaliyaa fakkatuun nu sodaachisuu yaaluun dhugaas homishaawaas miti. “Jettee duute naan hajedhanii …”f yoo hin taane, isaanis akaakuu duula kolonawaa duriitt lamuu ugganii seenuu jedhamee miti. Oromiyaan Somaliyaa mitii; burkutaawa empayeraaf lolli noolaa hafee hoxxeenillee hin jirraatu. Oromoon dandeettii fi aadaa of tasgabbeessuu qabaa. Akka jireenyi Mormitoota Itophiyaa, Oromiyaa fi lolli noolaa yoo hin jirre gabaabbatu ifaa dha. Tokkummaan biyya Amaaraa isa jedhamuuyyuu mamsiisaa taha. Garuu, utuu bakka bu’ooti ummataa dhugaa, dhimmi ilaalu naannaa diriira nagaa fi araaraa taahanii empayeraatt xumura gochuun hundaaf carraa hiree ofii itt murteeffanna bananii gamnummaa taha. Kan ofii sodaatanis sanaan irra haanu malee bilisummaa ummata biraa sichi hankaaksuu hin dandeenye yaaluun miti. Fakiin “Haadhaa” Metir Afawarq Takleen dhihaate si’achi hin tajaajilu. Hirmii tufaa.